Vatsim-piofanana Mandela Washington Fellowship 2021 : Tanora Malagasy sy Kaomoriana miisa 14 nisitraka izany
lundi, 21 juin 2021 19:14
Tanora Malagasy miisa 11 sy tanora Kaomoriana miisa 3 no voafantina hisitraka ny vatsim-piofanana Mandela Washington Fellowship 2021, araka ny fampahafantarana nataon’ny Masoivoho Amerikana eto Madagasikara sy Kaomoro.
Tamin’ny taona 2014 no nanomboka ny Mandela Washington Fellowship ho an’ny tanora mpitarika afrikana izay malaza indrindra amin’ireo programa anatin’ny Young African Leaders Initiative (YALI), ary mampiseho ny fahavononan’i Etazonia hanohana ny ho avin’i Afrika.
Tamin’ny taona 2010 no noforonina ny YALI hanohanana ireo tanora afrikana izay fototry ny fitomboan’ny toe-karena sy ny firoboroboany, ny fanamafisana orina ny demokrasia sy ny fahaiza-mitantana, ary ny fanamafisana ny fandriampahalemana sy ny filaminana manerana an’i Afrika.
Manodidina ny 4 400 ireo tanora avy amin’ny firenena afrikana aty atsimon’i Sahara nandray anjara tamin’ny Mandela Washington Fellowship nanomboka ny taona 2014.
Noho ny valanaretina Covid-19 izay atrehan’izao tontolo izao sy noho ny fametrahana ny fahasalamana sy fiainan’ireo mpandray anjara sy mpiara-miombon’antoka hafa ho laharam-pahamehana voalohany dia nanapa-kevitra ny Departemantam-panjakana Amerikana fa hatao amin’ny endrika ampitain-davitra ny fiofanana ho an’ny taona 2021.
Avy any amin’ny firenena niaviany avy ireo mpandray anjara no hanaraka ny fiofanana momba ny fahaiza-mitarika izay hatao eo anelanelan’ny 21 jona sy ny 30 jolay, ka tafiditra ao anatin’izany ny fianarana momba ny fitarihana, ny fiahiana na “mentoring”, ary ny fampivelarana amin’ny sehatry ny asa.
Handray anjara amin’ny fihaonana an-tampony ampitain-davitra izy ireo aorian’ny fiofanana. Ambonin’izay dia hisy mpandray anjara 100 hofantenana avy aty Afrika atsimon’i Sahara hisitraka fandalinana arak’asa miaraka amina rafitra amerikana miankina na tsy miankina amin’ny fanjakana, na sehatrasa tsy mitady tombom-barotra.
Ireo mpandray anjara rehetra dia hisitraka ny hetsika ho an’ireo maintimolalin’ny fandaharanasa aorian’ny fiofanany ho fanatevenana ny talentany arak’asa sy ny tambajotrany.